“Neymar wuxuu doonayaa inuu soo laabto laakiin….” – Madaxweyne ku xigeenka Barcelona – Gool FM
“Neymar wuxuu doonayaa inuu soo laabto laakiin….” – Madaxweyne ku xigeenka Barcelona
(Spain) 27 June 2019. Madaxweyne ku xigeenka Barcelona ee Jordi Cardoner ayaa xaqiijiyay in xiddiga reer Brazil iyo kooxda Paris St Germain ee Neymar Jr uu xiiseenayo inuu dib ugu soo laabto Blaugrana.
Laakiin Jordi Cardoner ayaa wuxuu dhinaca kale tilmaamay inay jiraan waxyaabo badan ay doonayaan inay baaritaano ku sameeyaan, kahor inta aysan ka hadlin shaqaaleysiinta Neymar Jr.
Wargeysyada gudaha dalka Spain, gaar ahaan kuwa Catalonia ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay sheegay in Neymar uu doonayo inuu ku soo laabto garoonka Cump Nou, gaar ahaan kaddib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeyay isaga iyo maamulka kooxda PSG.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadalada Madaxweyne ku xigeenka kooxda Barcelona ee Jordi Cardoner waxaana ka mid ahaa:
“Neymar? Tani ma ahan wakhtiga ku haboon ee looga hadli lahaa saxiixyada cusub, hadana waxaan ku jirnaa marxalada aan ku qiimeeneyno xiddigaha ka tagaya kooxda xagaagan, waxayna socon doontaa ilaa iyo 30-ka bishan, waxaana go’aan laga gaari doonaa magacyada xiddigaha uusan dooneynin macalinka inay kooxda sii joogaan”.
“Tani waxay dhacdaa sannad kasta, waxaa la iibiyaa ciyaartoyda aan loo baahneyn, si loo arko miisaaniyada kooxda, kaddib marka la iibiyo xiddigahan”.
“Xogta saxda ayaa ah in Neymar uu doonayo inuu ku soo laabto Barcelona, ​​ laakiin ma aqbalayo hadalkaas ee ah in Barcelona ay ka walwalsan tahay saxiixa Neymar, taasi ma ahan waxa miiska saaran, waxaa jira waxyaabo badan aan jecleysan ee ku saabsan qaabkii uu Neymar kaga dhaqaaqay kooxda Blaugrana, waxaana jira sidoo kale waxyaabo badan ay muhiim tahay in la badalo”.
“Ma ahan arin sax ah inaan heshiis ka saxiixano Neymar, ma aysan dhicin, cidna lama saxiixanin, wax xiriir ah lama sameynin isaga xiliyadii lasoo dhaafay, Neymar iyo ciyaartooy badan waxay doonayaan inay u ciyaaraan kooxda Barcelona”.
“Layaab iguma ahan in Neymar uu doonayo inuu dib ugu soo laabto Barcelona, waxay arintan horey u dhacday dhowr jeer, qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa inta ay naga tageen hadana dib noogu soo laabtay sida Cesc Fabregas iyo Gerard Pique”.
“Neymar waa ciyaaryahan fiican, laakiin qaabka uu kaga dhaqaaqay kooxda Barcelona waxay naga dhigeysaa inaan dib u eegno oo aan qiimeyno xaalada hadii ay haboon tahay, soo laabashadiisa waxay runtii noqon doontaa maalin maalmaha ka mid ah”.
Wax ka ogoow shax laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee Adduunka... (Neymar Jr, Maxamed Saalax iyo kuwo kale oo ka mid ah)